ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန် အောက်ပါ ညီမျှခြင်းသည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်မှာ ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန် ရှေ့ရောက်နေသော နေ့အရေအတွက် (အမှန်တကယ်တော့ ရက်စွဲ)ကို တွက်လို့ရပြီး ဒါကို ပြက္ခဒိန် နှစ်ခုအကြားက "secular difference" လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အနှုတ်ရလာဒ်များကတော့ ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်မှ ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ထက် စောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော် To train the conscripts, the army relied on the non-state funded "pwe-kyaung" ( ) monastic school system at the local level for the conscripts' basic martial know-how. The "pwe-kyaungs" which, in addition toareligious curriculum, taught secular subjects such as astrology, divination, medicine (including surgery and massage), horse and elephant riding, boxing ("lethwei") and self defense ("thaing"). This system had been in place since Pagan times. In the lowland Irrawaddy valley but also toalesser extent in the hill regions, all young men were expected to have receivedabasic level of (religious) education, and secular education (including martial arts) from their local Buddhist monastery.
ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန် ဒီနေရာတွင် formula_2 ကတော့ secular difference ဖြစ်ပြီး formula_3ကတော့ the year using astronomical year numbering(that is, use (year BC) − 1 for BC years)ဖြစ်ပါသည်။ formula_4 ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ အကယ်၍ စား၍ရသော ရလာဒ်ဟာ ကိန်းပြည့်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင် အနီးစပ်ဆုံးကိန်းပြည့်တန်ဖိုးသို့ ပြောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၀၀ နှစ်များတွင် ၁၉၀၀/၄၀၀=၄ ဖြစ်ပြီး −၅၀၀ နှစ်များတွင် −၅၀၀/၄၀၀=−၂ ဖြစ်ပါသည်။
Christian metal လျော့နည်းလာပြီး ဆယ်စုနှစ် underground သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Christian metal ဂီတသမားအများစုသည် extreme metal ကို စတင်တီးခတ်ပြီး thrsh metalအစား death metalနေရာဝင်ယူလာခဲ့သည်။ underground metal အဖြစ်အပျက်ထဲမှ ပရိတ်သတ်များသည် ပြင်းထန်သောအသံများကို ကြိုက်နှစ်လာပြီး ကျော်ကြားသောပုံစံများကို အထင်အမြင်သေးလာခဲ့သည်။ glam metal ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သကဲ့သို့ Stryperသည် ကျော်ကြားမှု လျော့နည်းလာသည့် ၁၉၉၃တွင် ပြိုကွဲခဲ့သည်။ ၁၉၉၀အတောအတွင်းတွင် Christian metal ရပ်ဆိုင်းချိန်တွင် Bruce Moore သည် e-book metal Missionaries ကိုရေးခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သော ဂီတအဖြစ်အပျက်နှင့် အတူတစ်သားတည်း ကျလာခဲ့သည်။ ဂီတအရည်အသွေး မြင့်တက်မှုနှင့်အတူ Christian metal နှင့် hardcore တီးဝိုင်းများသည် Tooth and Nail, Solid State, Facedown Record နှင့် secular label များဖြစ်သော Metal Blade နှင့် victory record အစရှိသောrecord များတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးလာကြသည်။ Christian metal သည် non-christian outletမှ ရရှိလာခဲ့သည်။ The German secular metal label Nuclear Blast Records သည် Christian metal ကိုဖြန့်ချီခဲ့သည်။ Norway မှ Arctic Serenades Record မှ Torodd Fuglesteg က အခိုင်အမာဆိုသည်မှာ nuclear Blast ပိုင်ရှင်သည် ခရစ်ယာန်များကို လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ သူသည် Nuclear Blast ဖြတ်လျက်သူသည် ဘာသာရေးမှတ်တမ်းနှင့် အတူ အရာအားလုံးကို တွန်းထိုးခဲ့သည်။
Christian metal christian metalသည် non-christian metal ဝါသနာအိုးတို့၏ ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရသည်သာမက လှုပ်ရှားမှုသည်လည်း တင်းကျပ်သော ဘာသာရေး၏ ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Allmusic ကရေးသားထားသည်မှာခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများသည် heavy metal ဆာတန်မာရ်နတ်ဝါဒ၏ အပြစ်တင်ခြင်း ခံရချိန်တွင် Stryper သည် metal နှင့် hard rock သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ထောက်ကူးအားပေးခဲ့သည်ကို သက်သေပြခဲ့သည်။ Stryper သည် album များကို Christian နှင့် secular ပရိသတ်တို့ထံရောင်းချရန် စီမံခဲ့သည်။ Jimmy Swaggart သည် Religiou Rock n’ Roll A Wolf in Sheep’s clothing စာအုပ်ကို ၁၉၈၇တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်များကို ဝေဖန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် heavy metal ဂီတကို အသုံးပြု၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကြေညာခဲ့သော Stryper တီးဝိုင်းကိုဖြစ်သည်။
ရုရှားသဒ္ဒါ Grammatical conjugation is subject to three persons in two numbers and two simple tenses (present/future and past), with periphrastic forms for the future and subjunctive, as well as imperative forms and present/past participles, distinguished by adjectival and adverbial usage (see adjectival participle and adverbial participle). There are two voices, active and middle/passive, which is constructed by the addition ofareflexive suffix -ся/сь/- to the active form. An interesting feature is that the past tense is actually made to agree in gender with the subject, for it is the participle in an originally periphrastic perfect tense formed with the present of быть (like the perfect passive tense in Latin), "to be", which is now omitted except for rare archaic effect, usually in set phrases (откуда есть пошла русская земля , "whence is come the Russian land", the opening of the Primary Chronicle in modern spelling). Verbal inflection today is considerably simpler than in Old Russian. The ancient aorist, imperfect, and (periphrastic) pluperfect tenses have been lost, though the aorist sporadically occurs in secular literature as late as the second half of the eighteenth century, and survives as an odd form in direct narration (а он пойди да скажи , etc., "exactly" equivalent to the English colloquial "so he goes and says"), recategorized asausage of the imperative. The loss of three of the former six tenses has been offset by the development, as in other Slavic languages, of verbal aspect. Most verbs come in pairs, one with imperfective or continuous connotation, the other with perfective or completed, usually formed witha(prepositional) prefix, but occasionally usingadifferent root. E.g., спать (to sleep) is imperfective; поспать (to takeanap) is perfective.